IMitchells vs The Machines: Eyona filimu yoSapho eNtsha yokuKhetha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IMitchells vs The Machines: Eyona filimu yoSapho eNtsha yokuKhetha
Lo mboniso bhanya-bhanya usanda kutyunjwa IBHASO LOKUKHETHA LWABANTU KWEYONA FILIMU YOSAPHO, kwaye ineetalente zelizwi zikaDanny McBride, uMaya Rudolph, u-Abbi Jacobson, kunye no-Olivia Colman njengo-PAL.
Ukukhutshwa kweMisitho ye-Iconic kuzisa ulonwabo lwazo zonke iintlobo kwiithiyetha zemiboniso bhanyabhanya njengeminyhadala ekhethekileyo yokuzibandakanya, ukuze abalandeli bahlangane kunye ukuze babukele amaqhula abathandayo, iimvumi, abadali bomxholo, imidlalo ephilayo, kunye nokunye.
I-Iconic igxile ekusebenzeni kunye nababonisi ukwandisa iindidi kunye neentlobo zemixholo ye-cinema yesiganeko ekhoyo kwiithiyetha ze-movie.
Amatikiti okubona iMitchells vs The Machines kwimiboniso bhanyabhanya ayafumaneka ukuqala ngoLwesine, 28 Okthobha kwiiofisi zeebhokisi zethiyetha.